ထမင်းမစားခင် အရင် ဦးချပါ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ထမင်းမစားခင် အရင် ဦးချပါ။
ထမင်းမစားခင် အရင် ဦးချပါ။
Posted by ဆူး on Jul 7, 2011 in My Dear Diary | 32 comments
ဆူး စိတ်ကူး ထမင်းမစားခင် အရင် ဦးချပါ။
အတန်းပိုင် ဆရာမ အခန်းထဲ ၀င်လာသည်။
ကလေးများ ညီညီညာညာ နုတ်ဆက်လိုက်ကြသည်။
နေ့လည်စာ ထမင်းစား ခေါင်းလောင်းသံ ကြားရသော အခါ…
ဆရာမအား နှုတ်ဆက်ပြီး ကျောင်းသားများ ထမင်းစားရန် ထမင်းချိုင့်ကိုယ်စီ ဖွင့်၍ စားကြသည်။ ထမင်းမစားခင် ဆရာက ခဏနေအုန်း ကလေးတို့ရေ… မစားနဲ့အုန်း ကျောင်းသား ဆိုတာ ကြီးတဲ့လူကို အရင်ဦးချ ရတယ်။
ပြောရင်း ဆိုရင်နဲ့ ထမင်းချိုင့်ဖွင့်ပြီး ထမင်းချိုင့် အလွတ် တခွက် ကို ထုတ်ပြီးလျှင် ကလေးတို့ ဆရာမ ကို မစားခင် ဦးချ ကြ ဟု ပြောပြော ဆိုဆိုနဲ့ ချိုင့်ခွက် အလွတ်ကို ကလေးတွေ စားပွဲရှေ့ကို ထိုးပေးလိုက်သည်။ တယောက်စီ လက်ဆင့်ကမ်းပြီး အတန်း အနောက်ဆုံး ရောက်တဲ့ အခါ အတန်းခေါင်းဆောင်မှ ယူလာကာ ဆရာမ အား လှမ်းပေးသည်ကို ယူပြီး ထမင်းနဲ့ ဦးချ ဟင်းမျိုးစုံနဲ့ စားတော်ပွဲ တည်ပါတော့တယ်။
အကြံကောင်းလျှင် တချက် ဆိုသည့် အတိုင်း ဦးချ ဟင်းထည့်သလား မထည့်ပဲ နေသလား တယောက်ချင်းစီကို သေချာ ကြည့်ထားပါသည်။ တကယ်လို့ မထည့်တဲ့ ကလေးဆိုလျှင်လည်း ဟေ့…. မောင်မောင်… မင်း ထည့်တာ ငါမမြင်သေးဘူးနော် ဆိုပြီး ကြိမ်းမောင်း တတ်သော ကြောင့် ကလေးများ မိဘ ကို နားပူနားဆာ တိုက်ပြီး ဟင်းများများ ထည့်ပေးဖို့ ဟင်းကောင်း ထည့်ပေးဖို့.. စသဖြင့် ကလေးများနဲ့ ကလေးမိဘများ စိတ်ညစ်နေရတဲ့ အပြင် နေ့စဉ် ကြုံနေရတော့ ဟင်းမကောင်းတဲ့ အခါ ကလေးက ကျောင်းမသွားချင်ဘူး ငိုယိုနေတာလည်း မြင်နေရပြန်တယ်။
ကိုင်း…… ဒီလို အသေး အမွှား ဘယ်သူ သိကြမလဲ။
အင်း မမဆူးရေ ..ပထမဆုံး ဦးချပေးလိုက်မယ်နော်… ကလေးတွေအစာအိမ်ဖြစ်မှာစိုးလို့နဲ့တူပါတယ်ဗျာ
ထမင်းအများကြီးမစားနဲ့..ဗိုက်ကြီးပူမှာစိုးလို့တဲ့ ချာမက ပြန်ကြောဒယ်
food test လုပ်တာပါ
အန္တရာယ် ရှိတာ တစ်ခုခုဆို ဆရာမက ကြိုသိအောင်ပါ
ရွာထဲမှာ အကောင်းမြင်ဝါဒီတွေ များသားပဲ။ ကောင်းပါလေ့။
ဒီပုံအတိုင်းဆို ပုံဂံခေတ် က အရည်းကြီးတွေ ကို သွားသတိရမိသား ဗျ
ဆရာမ ရဲ့ တပည့်မလေး တစ်ယောက်ယောက်သာ အရွယ်ရောက်လို့ 
အိမ်ထောင်ပြုတော့မယ်ဆိုရင်ကော လို့ …………..ဟီဟိ
ဦးလေး အစားအသောက် အကြောင်းကနေ ဘယ်က ဟာတွေ ပါလာတာတုန်း.
ကျောင်းသားတယောက်က ဂဏန်းချက်ဦးချ၊ နောက်တယောက်က မှိုချက်ဦးချ။ အင်း …ကြားဖူးတာ ပြောပါတယ်။ ဘာတဲ့ “အစားမတော် တလုတ်”တဲ့။
ဆင်းရဲသား ကျောင်းက ကလေးတွေ ပဲလှော် နဲ့ ကဇွန်းရွက်လောက်ပဲ ထည့်နိုင်ကြတာ ဂဏန်း အဆင့် မရောက်နိုင်ဘူး
လယ်ထဲက နှိုက်လာတဲ့ ပုစွန်လုံးနဲ့ ကောက်ရိုးမှိုတော့ ဖြစ်နိုင်တယ်နော်။
သိပ်ကို အကြံကောင်းတဲ့ ချာမဘဲ။
သူထပ် အကြံကြီးတဲ့ အုပ်ကြီးက ထမင်းမစားခင် အကြီးကို အရင်ဆုံး ဦးချ ရကြောင်း သင်ပေးထားလို့ပါ။
ကျောင်းတုန်းက ဆရာမတစ်ယောက်က အိမ်မှာ ၀က်မွေးလို့ဆိုပြီး အိတ်တစ်လုံးယူလာပြီး ကျောင်းသူတွေရဲ့ ထမင်းကျန် ဟင်းကျန်တွေကိုထည့်ခိုင်းတယ်။ ကိုယ်ကလည်း အ တော့ အိမ်ကလည်း ထမင်းဟင်းကို ကုန်အောင်စားရမယ်။ ချန်မထားရဘူးလို့ သင်ထားတော့ တစ်ခါမှ သွားမထည့်ဘူး။ အဲဒီတော့ ဆရာမက အကြောင်းရှာပြီး ရိုက်တယ်။ နောက်မှ သိသွားလို့ ထမင်းဟင်းကို မကျန် ကျန်အောင် ချန်ထားပြီး ထည့်ပေးရတယ်။ ကိုယ်တွေ့ နော်။
အန်တီ မမ ဆရာမ က ပိုဆိုးနေပြီ
လူ အတွက် ဟင်းတောင်းတာ မဟုတ်ပဲ ၀က် အတွက် တောင်းတာ မရလို့ ရိုက်တယ်တဲ့
ဆူးရေ ဦးချခိုင်းတာတော့မကြုံဖူးဘူး ။
ငယ်တုန်းက တတိယတန်းရောက်တော့ တခါမှစာမတော်ဘူးတဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက် တတိယတန်း(အတန်းပိုင် သူ့အမေ အတန်း)မှာ ပထမရသွားတာတော့ကြုံ ဖူးသား ။
ဒီလို ကိစ္စမျိုး တစ်ကယ် ရှိသလား…
တကယ်ကတော့.. အဲဒီဦးချတယ်ဆိုတာကြီးကိုက မဟုတ်တာပါ..။
ရှေးက မြန်မာဘုရင်တွေ ပွဲတော်တည်မယ်ဆို.. စားဦးစားဖျား အရင်စားရတဲ့ရှိတယ်မှတ်ဖူးတယ်..။
အဆိပ်ပါရင် အဲဒီစားဦးစားသူ မြန်မြန်ကြွအောင်လေ…။
ဒီခေတ်လည်း.. နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေမစားခင် ..အရင်စားရတဲ့သူရှိတာပဲ..။
သူတို့တွေကတော့ တန်ရာတန်ကြေးပေးပြီး/ရပြီး.. အလုပ်လုပ်ကြတာပါ..။
လူချင်းအတူတူ..တန်းမတူညီမမျှ… တလုံးပိုရှု… ဦးချတာပပျောက်ရေး..
ဦးချပြီး တော့ မစားဘူးလို့ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဦးချပါတယ် အိမ်မှာ လူကြီးတွေကို အရင်ဆုံး ဦးချ ထည့်ပေးပြီးမှ ကိုယ့် ပန်းကန်ထဲထည့်တာပဲလေ။ အခုလိုမျိုး ဆရာမက တတန်းလုံး ကို ဦးချ ခိုင်းတာ တော့ အခုမှပဲ ကြားဖူးတော့တယ် … ဆန်းလည်း ဆန်းပါပေ့ ချာမရယ် …အကြံလည်း ပိုင်ပါပေ့
ဒီတော့လည်း သူ့တလုပ်စာ အိမ်က ပိုထည့်ပေးလိုက်ကြပေါ့ကွယ်။ တယောက်အားဖြင့် မစွမ်းသာ၊ အများအားဖြင့် လုပ်သော်ရ၏တဲ့။ အတည်ပြောတာနော်၊ အတန်းထဲကတဝက် ဟင်းမကောင်းလည်း ကျန်တဝက် ဟင်းကောင်းပါလိမ့်မယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ စိတ်ထားတတ်ရင် မြတ်ပါတယ်
ဒီလိုပဲ နေ့တိုင်းကိုယ်စားတဲ့ထဲက ကျွေးနေတော့
ဘာတဲ့ “အစားမတော် တလုတ်”တဲ့။ ကျနော်လဲ အဲ့လိုမြင်တယ် မာလကီယားအုံးမယ်
ကြည့်လဲ အချခံ လို့ ကြုံရင်ပြောပေးပါ ဆြာဆူး
ထမင်းစားလျှင် ဦးချတယ်ဆိုတာ မကောင်းတတ်လို့ပါ … လူကြီးတွေကို အရင် ထည့်ပေးပြီးမှ ကိုယ်ကနှိုက်ချင်သလောက် နှိုက်စားလို့ ရပြီလေ .. ။
ဦးချတယ်ဆိုတာ ဗမာ့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုပဲ ..
ဆရာမက ကလေးတွေကို လက်တွေ့လေ့ကျင့်ပေးနေတာ …
အဲလို ဦးချ ခိုင်းတာ တော့ မကြုံဖူးသေးဘူး ၊ နယ်မှာ ကျောင်းတက်တုန်းက ဆရာ တစ်ယောက်ရန်ကုန် လာတာ ကျောင်းကိစ္စနဲ ကျောင်းသား ကျောင်းသူ တွေအတွက် မှတ်ပုံ တင် ကို ပလစတစ် လောင်းရ အောင် ယူသွားတယ်. . မှတ်ပုံတင် တစ်ခု ကို 500 တဲ့။ ပလစတစ် လောင်းခ။ ဆိုက်ကား စီးတာ3သောင်း စီကျတယ် တဲ့ .. အဲဒါ တော့ မှတ်မိ တယ် ။ အခုလည်း အဲဒီ ဆရာ မရှိတော့ ပါဘူး ပြီးခဲ့တဲ့3လ ပိုင်းက ကိုယ့် ကို ကိုယ် အဆုံး စီရင် သွားတယ်…
မူကြိုဖွင့်ရင်…အဲ့ ဒိနည်းအရင်သင်မယ်..ဆူး ဆီ က..
နာတို့ တအိမ်လုံးစားလို့ ရအောင်…….
ငါတို့ အရက်သမားဖြစ်နေတုန်းက ပြောခဲ့ဖူးတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်..။ အဲဒိလို ဦးချတာကို ဘယ်လိုပြောခဲ့သလဲသိလား? ဒါနဲ့ အလောက်စား ထပ်မရတော့ဘူးဆိုပြီး ခွေးတွေ ၀က်တွေ ကျွေးသလို ပုံကျွေးတာလား လို့ အပြောခံခဲ့ရဖူးတယ်..။ နောက်ကိုယ့်ကို အဲဂလို ဦးချလာရင်လည်း ရယ်စရာပြောသလို ဘာလိုလိုနဲ့ အဲဂလိုပဲ ပြောခဲ့ဖူးတယ်….။ ကလေးတွေကလည်း အဲဒိလို သဘောထားပြီး ကျွေးကြမှန်းမှ မသိတာ…။ အဲသဟာ ဘယ်တုန်းကလဲ ဘယ်မှာဖြစ်တာလဲ တိတိကျကျလေး ပြောပြရင်ကောင်းမယ်..။ ဆရာမတိုင်း အဲဂလို ဖြစ်နေတာတော့ မဟုတ်တန်ရာပါဘူး..။ အဲဒိတော့ ငါးခုံးမ တစ်ကောင်ကြောင့် တစ်လှေလုံး အပုတ်ခံမဲ့ အစား ပုတ်နေတဲ့ ငါးခုံးမ ရွေးဖယ်သင့်တာပေါ့…။ ညည်းပြောတာ ယေဘူယျ ဆန်နေတယ်..။ တိတိကျကျ ပြောပါလား?..။
ဆူး ရဲ့ အလုပ်က ၀န်ထမ်း တယောက်ရဲ့ ကလေး လတ်တလော တွေ့ကြုံနေရတဲ့ အခက်အခဲပါ။ ကျောင်းက ဆရာမတိုင်းတော့ မဟုတ်ဘူး ထင်ပါတယ်။ ကြားတဲ့ အခါမှ ထူးဆန်းလွန်းလို့.. ဒါမျိုးလေးတွေလည်း ရှိပါသေးလားလို့ တွေးမိရင်း ရွာထဲမှာ ပြောပြတာပါ။
ွှအံ့ဘွယ်ဦးချတာလေးတွေ့ဖူးတယ်။ အလှူတခုမှာ (အသိတွေထင်တယ်) ခပ်နောက်တောက်တောက်လူငယ် တယောက်က သူ့ဘေးနားကအသက်ကြီးကြီး လူကြီးတယောက်ကို ကြက်သားဟင်း တောင်ပံအဖျားလေး ဦးချတာတွေ့ဖူးတယ်။
ကြီးသူကိုရိုသေ ရွယ်တူကိုလေးစား ငယ်သူကိုသနား ဆိုတော့ ကြီးတဲ့သူကို ဦးချတာ ကောင်းတဲ့ အကျင့်လို့ပဲ မြင်တယ် … ဒါပေမဲ့ ဒီလိုကြီးကတော့ မကောင်းဘူး..
ငယ်ငယ်တုန်းက ဆရယတစ်ယောက်က ဦးချတာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဟာသလေးပြောပြတယ်
အိမ်မှာ မိသားစုတစ်စု ထမင်းစားတော့မယ်၊ ကြက်သားဟင်းပန်းကန်ကြီးက အလယ်မှာ
ကလေးက မိဘတွေကို ဦးချရမယ်
သူ့စိတ်ထဲ တွေးနေတာက “အင်း…ဟိုအသားတုံးကြီး ငါစားရအောင် ဒီဘက်က အရိုးပါတာတွေ ဦးချမယ်၊ ပြီးမှ ကိုယ်ဘာသာကိုယ် အသားတုံးကြီးယူစားမယ်..”တဲ့